Iran Oo Ka Jirta Internet La'aanta - Awdinle Online
Iran Oo Ka Jirta Internet La’aanta
November 22, 2019 (Awdinle Online) – Internet la’aan ka jirta Iran oo looga dan leeyahay in lagu caburiyo dibad-baxayaasha kasoo horjeeda dowladda ayaa galay maalintii lixaad, ayada oo mas’uuliyiinta ay si tartiib tartiib ah usoo celinayaan.
Kooxda fadhigeedu yahay London ee Internet-ka la socota ee NetBlocks ayaa sheegtay in internet la’aanta guud ee ka jirta Iran ay hadda u muuqato inay kasoo reeneyso kadib 113 saac oo xiriir ah.
Kooxdan ayaa sheegtay in illaa iyo hadda lasoo celiyey 15% internet-ka dalka.
Isaga oo la hadlayey weriyayaasha, ayaa ayaa xoghahaya golaha sare ee Internet-ka Iran, Abolhassan Firouzabadi waxa uu sheegay in ay dhowaan go’aan buuxa ka qaadan doonaan in internet-ka lasoo wada celinayo iyo in kale.
Internet la’aanta ayaa dhaawac xooggan gaarsiisay dhaqaalaha Iran oo markii horeba ay waxyeelo kasoo gaartay cuanqabateenada Mareykanka.
Mas’uuliyiinta Iran ayaa sheegay in sababta ay Internet-ka u jareen ay tahay inay ka hortagaan in mucaaradka ay online-ka kula xiriiraan islamarkaana ku kaciyaan dibad-baxayaasha.
Previous articleGuddi loo xil saaray qabsoomida Muxaadarada Sheekh Umul
Next articleDhageyso :-Dowladda Faderaalka oo dib u dhigtay Muxaadarada Sheekh Umal